ခွေးများအတွက် Thelazia | Dogs World
Lourdes Sarmiento | | ရောဂါများ
လူများကဲ့သို့ပင်ခွေးများသည်လည်းရောဂါများခံစားနိုင်သည်။ သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြင့်သွေးဆောင်သောမကောင်းမှုများသည်ခွေး၏အသက်ကိုအလေးဂရုမပြုဘဲခွေး၏အောက်တွင်ထားနိုင်သည် သင့်ရဲ့မော်တာ, ဦး နှောက်, သို့မဟုတ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျွမ်းကျင်မှုကို disable လုပ်သောအခြေအနေ။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင်မှတ်တမ်းများရှိသည့်ခွေးများတွင်ရောဂါအများစုသည်ကာကွယ်ဆေးနှင့်ကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့်အောင်မြင်စွာဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ခဲ့သော်လည်းသက်သာရာရစေခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုအလင်းရောင်ဖြင့်လျစ်လျူရှုသင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ဒီနေ့တောင်မှဖြစ်ရပ်များရှိပါတယ် ခွေးအချို့ရောဂါများ ဒီကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်ထဲမှာတောင်မှသားကောင်များကိုဆက်လက်တိုင်ကြားနေတယ်၊ ဤရောဂါများထဲမှတစ်ခုမှာ Thelazia ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဤနည်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
1 ခွေးများတွင် thelazia ကဘာလဲ?
2 ခွေးများအတွက် thelazia ၏ရောဂါလက္ခဏာများ
ခွေးများတွင် thelazia ကဘာလဲ?
Thelazia တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အာရှမူရင်းရောဂါ ၎င်းသည်ဥရောပတိုက်ကြီးတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့သွားပြီး၎င်းသည်လူသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုမျက်စိမသက်မသာဖြစ်စေသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည် (ဟုတ်ကဲ့၊ ဤရောဂါသည်လူမှတိရစ္ဆာန်သို့ကူးစက်နိုင်သည်) ။
ဤရောဂါသည်အမျိုးအစားတွင်တွေ့ရသော Thelazia callipaeda အမည်ရှိကပ်ပါးကောင်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် သစ်သီးပင်များ၏ထူးခြားသောယင်ကောင် ကြောင်းအရည်အသွေးကိုရာသီကာလအတွင်းထင်ရှားနေကြသည်။ ဤယင်ကောင်များသည်တိရစ္ဆာန်များ၏မျက်စိ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဆွဲဆောင်ပြီး၎င်းတို့အပေါ်သို့ဆင်းသက်သောအခါမကြာမီတွင်အဆင်မပြေခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ကပ်ပါးကောင်မှထွက်ခွာသွားသည်။ ထူးခြားသောအရာတစ်ခုမှာဤအရာများဖြစ်ပျက်ရန်၊ တစ်ခါတစ်ရံလပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်အိမ်ရှင် (သို့) တိရစ္ဆာန်သည်၎င်းကိုသိသာသောနည်းလမ်းဖြင့်မမြင်ဘဲဖြတ်သန်းသွားသည်။
ဤကပ်ပါးကောင်၏ဘဝသံသရာသည်သတ်မှတ်ထားသောအိမ်ရှင်တစ်မျိုး၊ ကပ်ပါးကောင်သည်စားသုံးနိုင်ပြီးယင်ကောင်များမကြာခဏသွားနိုင်သည်၊ သို့မှသာကျန်ရှိနေသောလောင်းများသည်အတွင်းရှိယင်ကောင်အတွင်းသို့ရွေ့လျားနိုင်သည်။ သူတို့ကအခြားအိမ်ရှင်၏ Ocular လျှို့ဝှက်ချက်ထိမှီတိုင်အောင်ရောဂါကူးစက်မှုရင့်ကျက်ဘယ်မှာ။ ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကပိုးလောင်းရင့်ကျက်ဖို့တစ်လကြာနိုင်ပါတယ်။ ခွေး၏ဖြစ်ရပ်မှာပိုးမွှားကူးစက်မှုနီးကပ်ပြီးရှည်လျားသောအခါ, ကပ်ပါးကောင်ကိုမျက်စိအတွင်းမြင်နိုင်သည်။ သစ်သီးပင်များအနီးတွင်နေထိုင်သောခွေးများကိုယင်းသည်ပိုမိုမြင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ (ဥပမာနှစ်၏အချိန်ကဲ့သို့) သြဇာလွှမ်းမိုးသောအခါကပ်ပါးကောင်သည်တိရိစ္ဆာန်မျက်စိ၏မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်ပိုမိုမြင်နိုင်သည်။
ခွေးများအတွက် thelazia ၏ရောဂါလက္ခဏာများ
အဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အချိန်မှာခွေးအတွက်ရိပ်မိနိုငျသောရောဂါလက္ခဏာတွေများထဲတွင် တစ် ဦး သိသိသာသာအဆင့်မြင့်အဆင့်တွင်ရောဂါကူးစက် သူတို့သည်မျက်စိကိုပတ်ပတ်လည်ယားယံခြင်း၊ အဆင်မပြေခြင်း (ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခြင်းအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်ပါက) သူတို့ကိုဖြတ်ခြင်း၊ မျက်စိခြင်း၊ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိသည့်အဖြစ်အပျက်မှာမျက်လုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးတွင်ရှိသောအနာဖြစ်ပြီးကပ်ပါးကောင်ကိုမျက်စိထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးရက် ၃၀ အကြာ (၇ မှ ၁၅ ရက်အထိဖြစ်သည့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်း ဤရောဂါများကိုရှောင်ပါ အကောင်းဆုံးကတော့ကပ်ပါးကောင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကတိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်သာလုပ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးတီကောင်တွေမြင်နိုင်မမြင်နိုင်တာအမြဲတမ်းခွင့်မပြုဘူး။
အထူးပြုဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကပ်ပါးကောင်များကူးစက်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း၎င်းကိုကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ် ဦး ကသတ်မှတ်သည်။ ရင်တောင်မှ ဤကပ်ပါးကောင်များ၏ပြန့်ပွားတားဆီး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များတွင်ခက်ခဲသည်၊ ကပ်ပါးကောင်များ၏သံသရာကိုစတင်နိုင်ပြီးခွေးများကိုရောဂါကူးစက်စေနိုင်သည့်အခြေအနေအချို့ကိုတတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအသီးယင်ကောင်များပြန့်ပွားစေရန်ရှောင်ရှားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကပ်ပါးကောင်သည်အခြားခွေးမျိုးစိတ်များနှင့်လူသားများနှင့်လူတို့ကူးစက်တတ်သောဆန့်ကျင်ဘက်အမှုများတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ရောဂါများ » ခွေးများအတွက် Thelazia